အိန္ဒိယနှင့် ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး၌ တပ်မတော်က အေအေစခန်း ၁၂ ခုကို ဖျက်စီးဟု အိန္ဒိယမီဒီယာများ ရေးသား | Frontier Myanmar
အိန္ဒိယနှင့် ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး၌ တပ်မတော်က အေအေစခန်း ၁၂ ခုကို ဖျက်စီးဟု အိန္ဒိယမီဒီယာများ ရေးသား
အိန္ဒိယတပ်မတော်နှင့် ပူးတွဲကာ ယခုလအစောပိုင်း၌ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် စစ်ဆင်ရေးတွင် အေအေအဖွဲ့၏ စခန်း ၁၂ ခုကို မြန်မာ့တပ်မတော်က ဖျက်စီးခဲ့သည်ဟု အိန္ဒိယစာနယ်ဇင်းများက ရေးသားထားကြသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်အနီးရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အေအစခန်းများအား ပစ်မှတ်ထားသည့် စစ်ဆင်ရေးကို စစ်ကိုင်းဒေသကြီးရှိ နာဂသူပုန်အဖွဲ့၏ ဌာနချုပ်များအား တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်မှုမတိုင်မီ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းတို့က ရေးသားထားသည်။
“ယခုစစ်ဆင်ရေးများသည် အိန္ဒိယ-မြန်မာနယ်စပ်တစ်လျောက် တပ်ဖွဲ့များချထားမှုနှင့် လွှမ်းခြုံမှုဧရိယာအရ ဆိုလျှင် ပထမဆုံးဖြစ်ပြီး ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ် ကြာမြင့်ကာ မတ် ၂ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့သည်” ဟု India Today သတင်းမဂ္ဂဇင်းက မတ် ၁၅ ရက်နေ့တွင် ရေးသားထားသည်။
နယူးဒေလီရှိ ကာကွယ်ရေးဌာနအသိုင်းအဝိုင်း၏အဆိုအရ အိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့ဝင်များက နယ်စပ်ကို ဖြတ်ကျော်ခဲ့ခြင်းမရှိဟု The Hindu နေ့စဉ်သတင်းစာက မတ် ၁၆ ရက်နေ့တွင် ရေးသားသည်။
သတင်းရင်းမြစ်များကို ကိုးကားပြီး အဆိုပါသတင်းစာတွင် ရေးသားထားမှုအရ မီဇိုရမ်ပြည်နယ်၊ Lawngtala ခရိုင်၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၇ ရက်နေ့က စတင်ခဲ့သည့် ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွင် တပ်မတော်က “ရခိုင်ဒေသရှိ” အေအေစခန်း “၁၀ မှ ၁၂ ခု” အား ဖျက်စီးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
အေအေစခန်းများ တည်ရှိနေမှုက ဒေသတွင်းရှိ ကုလားတန်ဘက်စုံစီမံကိန်းအား ခြိမ်းခြောက်နေသည့်အတွက် စစ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု The Hindu က ရေးသားထားသည်။ အဆိုပါစီမံကိန်းသည် ချင်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်တို့အားဖြတ်ကာ ကိုလ်ကတ္တားမြို့နှင့် မီဇိုရမ်ပြည်နယ်တို့ကို ပင်လယ်ရေကြောင်း၊ ကုန်းတွင်းရေကြောင်းနှင့် ကုန်းလမ်းခရီးများဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသည့် ထိုစီမံကိန်းအတွက် မူဘောင်သဘောတူညီချက်ကို အိန္ဒိယနှင့် မြန်မာတို့က ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြသည်။ ထိုအထဲတွင် ပလက်ဝရှိ ကုလားတန်ဆိပ်ကမ်းမှ မီဇိုရမ်နယ်စပ်အထိ ၁၀၉ ကီလိုမီတာရှည် ကားလမ်းဖောက်လုပ်ရေးလည်း ပါဝင်သည်။
“ထောက်လှမ်းရေး သုံးသပ်မှုတွေအရ ….. ကုလားတန်စီမံကိန်းကို ခြိမ်းခြောက်နေမှုအတွက် မီဇိုရမ်တောင်ဘက် မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ စခန်းချထားတဲ့ သောင်းကျန်းသူအုပ်စုတွေကို တိုက်ထုတ်ဖို့ စစ်ဆင်ရေးကို အိန္ဒိယတပ်မတော်က စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု India Today က ရေးသားထားသည်။
“အိန္ဒိယနဲ့ မြန်မာတပ်မတော်တို့က အကြီးစား ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေးတွေကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်” ဟု ၎င်းက ရေးသားထားသည်။ မီဇိုရမ်နယ်စပ်ရှိ အေအေစခန်းများကို ဦးစွာပစ်မှတ်ထားခဲ့ပြီးနောက် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မြောက်ဖျားရှိ Nagaland-Khaplang National Socialist Council ဌာနချုပ်များကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စစ်ဆင်ရေးမစတင်မီ နှစ်လခန့်အကြာကတည်းက ကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု နယူးဒေလီရှိ လုံခြုံရေးသတင်းအရင်းအမြစ်များ၏ ပြောကြားမှုကို ကိုးကားပြီး India Today ရေးသားထားသည်။
မီဇိုရမ်တွင် ဆောင်ရွက်ပြီးပါက အိန္ဒိယအား တိုက်ခိုက်နေသည့် သူပုန်အဖွဲ့များကို မြန်မာစစ်တပ်က တိုက်ခိုက်ရန် သဘောတူညီခဲ့သည်ဟု ထိုသတင်းရင်းမြစ်က ပြောကြားသည်။
အိန္ဒိယစစ်တပ်က ပံ့ပိုးပေးမှုများဖြင့် ထိုစခန်းများကို မြန်မာ့တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ သိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆက်လက်ပြောကြားထားသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် အေအေနှင့် တပ်မတော်တို့အကြား တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်နေပြီး သေဆုံးသူ ဒါဇင်နှင့်ချီရှိလာကာ လူပေါင်း ၁၀,၀၀၀ ခန့်မှာလည်း နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသည်။
In-depth, unbiased coverage of Myanmar in an era of transition. Our fortnightly English language print magazine is published every other Thursday, with daily news updates online.
Uncategorized @mm, ဓာတ်ပုံအက်ဆေး
ဓာတ်ပုံအက်ဆေး – မြောက်ဦးလော့ဒေါင်းမချခင်ကဖြစ်သည်
ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာတွေ့ရှိမှု တစ်ဟုန်ထိုး မြင့်တက်မလာမီ ဖရွန်းတီးယားမြန်မာက မြောက်ဦးမြို့အတွင်းက အခြေအနေများကို သတင်းဓာတ်ပုံရယူခဲ့သည်။
Hkun Lat ရေးသားသည်။
တစ်သီးပုဂ္ဂလ ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် ရခိုင်လွှတ်တော်အမတ်များ
ပျံ့နှံ့မှုမြန်လာတဲ့ ရခိုင်ပြည်က ကိုဗစ်-၁၉
ကလေးစစ်သားအသုံးပြုမှုပုံစံအားလုံး မြန်မာစစ်တပ် အဆုံးသတ်ရမည့်အချိန်ရောက်ပြီ
Volume 6, Issue 9